Wargeyska Geeska Afrika Oo Waraysi La Yeeshay Safiirkii Hore Ee Maraykanka Ee Itoobiya Danjire David Shinn – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wargeyska Geeska Afrika Oo Waraysi La Yeeshay Safiirkii Hore Ee Maraykanka Ee Itoobiya Danjire David Shinn
Allhadaaftimo July 21, 2020 Uncategorized
(Geeska)-Wargeyska Geeska Afrika ayaa waraysi la yeeshay danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiyi jiray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya danjire David Shinn oo khabiir ku ah arrimaha gobalka Geeska Afrika.
Danjire David Shinn, wuxuu ka hadlay aragtidiisa ku waajahan xidhiidhka u bilaabmay Somaliland iyo Taiwan, mawqifka uu xidhidhkan ku cambaareeyay China iyo doorka Maraykanka. Danjire Shinn oo uu tifaftiraha wargeyska Geeska Afrika Maxamed Xuseen Jaamac (Rambo), la yeeshay waraysi dheer, ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay qoraal kooban oo 9 Jullaay lagu baahiyay barta twitterka ee Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ee Maraykanka. Waraysigaas danjire David Shinn, oo bahda Geeska Afrika u soo turjumeen Soomaali, wuxuu u dhacay sidan:
Diblomaasi ahaan, maxaad ku macnayn kartaa xidhiidhka cusub ee u bilaabmay Somaliland iyo Taiwan?
Taiwan waxa ay ogolaatay inay ka furato Hargeysa “Xafiis Wakiilnimo (Representative Office), Somaliland na waxa ay ogolaatay inay ka furto Taipei “Xafiis Wakiilnimo (Representative Office). Waxa muhiim ah in la fahmo inaan tani la mid ahayn aqoonsi diblomaasiyadeed oo rasmi ah (formal diplomatic recognition). Taiwan waxa hadda si rasmi ah u aqoonsan shan iyo toban dal, oo hal dal keliya ka yahay Afrika — waa dalka Eswatini. Dhinaca kale Taiwan waxa ay Afrika ku leedahay shan “xafiis ganacsi” (trade offices), oo ku kala yaala Johannesburg, Algiers, Cairo, Nairobi, iyo Lagos. Waxa ay sidoo kale ku leedahay “xafiisyo isku-xidh” (liaison offices) Pretoria iyo Cape Town. Waxa ay iila muuqataa in “Xafiiska Wakiilnimo (Representative Office) ee laga aasaasay Hargeysa iyo Taipei ay la mid yihiin “xafiisyada isku-xidh” (liaison offices) ee ka jira Pretoria iyo Cape Town. Waxa ay u muuqan kartaa in yoolka Taiwan iyo Somaliland labaduba uu yahay inay balaadhiyaan gaadhistooda arimaha debedda (foreign outreach).
China wuxuu saldhig ku leeyahay Djibouti oo ay Somaliland jaar yihiin, imikana Somaliland waxay martigelisay xafiiska diblomaasiyadeed ee Taiwan, dawladda Soomaaliya iyo dawladda China, labaduba si adag ayay uga horyimaadeen xidhiidhkan diblomaasiyadeed ee bilaabmay. Arrintani maxay ku soo kordhin kartaa siyaasadda Geeska Afrika?
Xaqiiqda ah in Shiinuhu ku leeyahay saldhig ciidan Djibouti waxa ay noqon kartaa inaanu wax raad ah ku lahayn Somaliland. Somaliya waxa ay arinkan soo kordhay uga soo horjeedda sababo iska cad. Waxa ay [Somaliya] aqoonsan tahay Beijing islamarkaana waxa ay u aragtaa in Somaliland tahay qayb ka mid ah Somaliya. Shiinuhu sababo sidoo kale iska cad ayuu uga soo horjeedaa. Tan iyo sanadkii 1949 Shiinuhu wuxuu u ololaynayay mabad’a’ “Shiine mid keliya ah” (Once Chine) islamarkaana wuxuu si joogto ah uga soo horjeeday in aqoonsi diblomaasiyadeed la siiyo Taiwan. Dhinaca kale, waxa uu aqbalay [Shiinuhu] xafiisyada ganacsi ee Taiwan (Taiwan’s trade) iyo xitaa xafiisyada isku xidh (liaison offices) ee u qaabaysan inay gaadhaan yoolal aan siyaasad ahayn iyo kuwo aan diblomaasiyad ahayn (non-political and non-diplomatic goals).
Maraykanka iyo Taiwan xidhiidh dhow ayay leeyihiin, imikana waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanku waxay ku lug leedahay wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya. Miyaad rumaysantahay in bilowgan diblomaasiyadeed uu gacan ka gaysan doono wada hadalada?
Qoraal barta Twitter ka lagu qoray oo aan cidda qortay magaceedu la socon (An anonymous tweet) oo ka soo baxday Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, 9kii July ayaa yidhi: (Waa arin wayn inaan aragno Taiwan oo kor u qaadaysa xidhiidhkeeda Bariga Afrika waqti ay jirto baahi wayni. Taiwan waxa aanu iskaashi wayn kala leenahay caafimaadka, waxbarashada, caawimada farsamo iyo in kaloo badan!” Inkasta oo ay tani tahay tebin aan caadi ahayn (most unusual communication), ma muujinayso in Maraykanku uu arinkan wax dheeraad ah oo kale ku darsanayo.
Previous Wararkii ugu danbeeyay shirka Dhuusamareeb iyo Weriye Hasan Cadde
Next Ciidanka Somaliland ee Yube oo hakiyey Gargaar ay Xukuumada SL u dirtay Badhan oo uu waday Masuul Puntland katirsan.